အစွန်းရောက်ဝါဒသမား ဦးအေးမောင်က ၁၉၈၂ နိုင်ငံဥပဒေပြင်သင့်မပြင်သင့်ဝေဖန် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
အစွန်းရောက်ဝါဒသမား ဦးအေးမောင်က ၁၉၈၂ နိုင်ငံဥပဒေပြင်သင့်မပြင်သင့်ဝေဖန်
RB News‘s photo.
၁၉၈၂ နိုင်ငံဥပဒေပြင်သင့်မပြင်သင့်၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်သောမတ် အိုဟေးကင်တားနားက အစိုးရကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သော်လည်းယင်းဥပဒေပြင်ခြင်းမပြင်ခြင်းသည် လွှတ်တော်နှင့်သာဆိုင်ကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော့်သဘောကတော့ပြည်သူတွေရဲ့သဘောပါပဲ။ နိုင်ငံသူ/သားတွေကမိမိတို့အချုပ်အခြာအာ ဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဒီဥပဒေကိုပြင်မှဖြစ်မယ်လို့ယူဆခဲ့ရင်ပြင်နိုင်ချေရှိပါ တယ်။ ပြည် ခိုင်ဖြိုး လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးကဘူးသီးတောင်ဘက်မှာလေးနှစ်လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အ ခုတော့စစ်ကိုင်းတိုင်းကလွှတ်တော်အမတ်ကအဲဒီ ၁၉၈၂ ဥပဒေကိုပြင်ဖို့ တင်တယ်။ ပြင်ဖို့တင်တဲ့အခါ မှာလည်းပြည်ခိုင်ဖြိုးတံဆိပ်တွေပါတယ်။ အဲဒီတော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဒီ ၁၉၈၂ ဥပဒေကိုပြင်ဖို့ကြိုး စားနေတယ်လို့ယူဆတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ခဲ့ တယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေဟာ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုမဟုတ်ဘူး။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကို မူကြမ်းကိုဦးနေ၀င်းအစိုးရကလူထု ကိုအကြိမ်ကြိမ်ချပြခဲ့တယ်။ လူထုသဘော ထားတွေ နဲ့ရေးခဲ့တယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်ဥပဒေဟာအဲဒီကာလ ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားနဲ့အတည်ပြုခဲ့တာ အဲဒါကိုကင်တားနားဘဲ ပြောပြော၊ ဘန်ကီမွန်က ဘဲပြောပြော၊ ဦးသိန်းစိန်ကဘဲပြောပြော၊ ပြင်သင့်ပြီလို့ပြောပေမဲ့ ပြင်ချင်မှပြင် မှာပေါ့။ ပြင်မယ် မပြင်ဘူးဆိုတာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အပေါ်မှာ ပဲရှိတယ်။ ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ခံတယ်။ လူထုကမပြင် သင့်သေးဘူး။ ဒီဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲနေဦးမယ်ဆိုရင် မပြင် ဘူး” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေမောင်က “၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံသား ဥပဒေဟာ လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွန်းနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူး။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေဟာ Dead Law ဖြစ်နေ တယ်။ ကျွန်တော်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း ဥပဒေအရပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီဥပဒေ ကသုံးသာသုံးနေတာတရားမ၀င်ဘူး။ အခုကျွန်တော်တို့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားနေတဲ့အခါမှာ ဒီလိုဥပဒေတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်။” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
← ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၉)
၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသင့်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော →